FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA INDIANINA AMERIKANINA - ALIKA
Fang ny alika indianina amerikanina zanaky ny 2 taona
Lisitry ny alika amerikana mifangaro indianina
Ny Dog American Indiana Amerikanina dia tonga amin'ny habe roa miavaka, ny halavan'ny volon'ondry roa ary ny lokon'ny loko palitao roa. Izy io dia afaka manomboka amin'ny volafotsy ka hatramin'ny mainty, ao anatin'izany ny palitao miloko sokatra. Ny alika izay mampiseho palitao sokatra dia toa masina ho an'ny Amerikanina tera-tany. Ny palitaony dia mety ho fohy sy matevina, misy sosona roa matevina, ary ny palitao dia porofon-drivotra sy rano, amin'ny akanjo lava lava lava misy akanjo lava matevina. Ny sofina dia maratra sy mahitsy, malalaka sy malalaka ny loha eo anelanelan'ny masony ary lohany miendrika zoro no mihidy mankany amin'ny vava malefaka. Ny maso dia miloko volontsôkôlà ka hatrany amber. Izy ireo dia miendrika almond miaraka amina faharanitan-tsaina mijery an'izao tontolo izao. Ny rambo dia azo fehezina mafy toy ny amin'ny Alaskan Malamute na Siberian Husky, fa ny fari-piainan'ny karazany kokoa dia mirona mankany amin'ny rambony lava mitazona miaraka amina kink kely na miondrika amin'ny farany.
Avo dia avo tokoa ny haavon'ny alika amerikanina indianina. Ity karazana ity dia mora zarina sy maniry hampifaly ireo mpiara-belona aminy. Tsy mivadika sy miaro ny ankohonany izy io. Mifandraisa tsara hialana amin'ny mahamenatra azy amin'ny olon-tsy fantatra. Ny alika indianina amerikanina tera-tany dia natokana ho an'ny tompony. Ny alika indianina amerikanina dia biby saro-pady izay mahay tsara fahefana matanjaka , fa tsy hasiaka. Tena tsara izy ireo miaraka amin'ny ankizy sy biby hafa, ao anatin'izany ny alika hafa, biby fiompy ao an-trano ary koa ny biby fiompy. Mazàna a hentitra 'TSY' hampijanona azy ireo amin'ny lalany. Izy ireo dia biby be mpampiasa indrindra namboarina hiasa, toy ny misarika sled na mihaza izay lalao nofidinao hihaza. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra mazava ny tsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo.
Lanja: 55 - 120 pounds (25 - 55 kg)
Hahavony: 23 - 34 santimetatra (58 - 67 sm)
Ny alika indianina amerikanina tera-tany dia tsy mahomby amin'ny alika trano na housedog tanteraka. Mila faritra voafefy ahafahany mihazakazaka sy milalao araka ny sitrapony ary tsy mifanaraka tsara amin'ny fomba fiofanana crate 'crate closed'. Raha mihidy anaty vata, dia heveriny fa faizina izany ary tsy azony hoe inona no tsy nety nataony na ny antony anasaziana azy. Mety ny tokotany lehibe. Ity karazana ity dia aleon'ny any ivelany, ny fandrianao na ny fandriana, na amin'izay toerana misy ny tompony.
Ny alika indianina amerikanina mitaky fanazaran-tena antonony. Mila entina isan'andro, lava, haingana izy ireo MANDEHANA na jogging. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ho fanampin'izany, hahazo tombony amin'ny faritra lehibe sy azo antoka izy ireo hahafahan'izy ireo mihazakazaka afaka amin'ny toerana hankafizany ny romp isan'andro. Ny haavon'ny angovo dia miovaova amin'ny alika iray mankany amin'ny manaraka, toy ny amin'ny olona, ​​samy hafa daholo izy rehetra. Tokony ho iray amin'ny iray amin'ny 20 no ho karazana 'hazakazaka mihazakazaka' matanjaka be izay mahatonga ny alika sled tsara ho amin'ny hazakaza-tsoavaly, fa amin'ny salan'isa dia alika malemy paika izy ireo izay tsy mila efitrano malalaka hihazakazahana.
Manodidina ny 14 ka hatramin'ny 19 taona
habe sy lanja spaniel akoho
Ny NAID dia mandatsaka ny palitaony indray mandeha isan-taona amin'ny lohataona. Aosory ny palitao mandritra ny vanim-potoana fandatsahana mba hampihena ny volo tsy ilaina ao an-trano.
Ny mpiompy ny NAID dia milaza fa ny Native American Indian Dog® (NAID®) dia novokarina nifantina mba hamoronana ny endrika sy ny fahaizan'ny alika tany am-boalohany amerikanina. Ny alika no hany biby enta-mavesatra ampiasain'ny Teratany Amerikanina talohan'ny nampidiran'ny Espaniôla ny soavaly tamin'ny tapaky ny taona 1500 ary ampahany lehibe tamin'ny fianan'ny tanàna. Ny alika dia hisintona travois mitondra ny fananan'ny fianakaviana, mihaza ary manjono, ary 'mpitaiza 'ny zaza sy ny be antitra rehefa nanangona voankazo sy anana ireo vehivavy. Ny antontan-taratasy ara-tantara nosoratan'ny misiônera, mpitan-trondro, mpikaroka ary mpandraharaha dia nandrakitra ny fiainana nanao ahoana ho an'ny 'Natives' sy ny alikany ary maro ny sary, sary hosodoko ary sary. Amin'ity antontan-taratasy ity no nananganana ny karazany ary avy eo Ramatoa Karen Markel, Majestic View Kennels, no marika ara-barotra, tamin'ny tapaky ny taona 1990. Ny NAID® androany dia voaporofo fa karazana alika eken'ny firenena ary voasoratra anarana mampiseho toetra tian'ny Amerikanina teratany amin'ny alika razambeny. Izy ireo dia tena manan-tsaina, marobe, mankafy ny halavan'ny androm-piainana lava ary hypoallergenic. Izy ireo dia ampiasaina ho namana mpihaza tena tsara, alika fitsaboana, alika mpanampy amin'ny kilema, biby mikaroka sy famonjena, mpikatroka mpanao fifaninanana mavesatra, alika mpanao fanaingoana ary namana akaiky fianakaviana.
Ny sasany kosa nilaza fa ny alika amidy amin'ny alika karana dia tsy famoronana indray. tamin'ny fototra alika zanatany dia lany tamingana ary efa hatramin'ny talohan'ny famoronana sary. Ny Indiana dia tsy manana alika madio. Alika mifangaro no azy ireo. Tamin'ny fahatongavan'ireo Eoropeanina, ireo alika ireo dia nanjary nifangaro tamin'ny alika avy any Eropa sy firenena hafa. Satria ny alika dia tsy alika madio na oviana na oviana, ary satria tsy nisy nanelingelina ny handinika azy ireo dia tsy ho azo atao ny mamorona azy ireo indray. Ny NAID dia karazana alika vaovao natomboky ny mpiompy iray.
Raha misy kosa milaza hoe: 'Alika iray teraka tany Amerika avaratra no mbola misy. ny Alika Carolina izay efa Nosedraina ny ADN ho amerikanina. Ary koa, ny Naid dia TSY mitovy amin'ny alika tompon-tany. Izy ireo dia mitovy amin'ny asan'ny zavakanto maoderina romantika amin'ny tompon-tany amboadia Ny amboadia, izay efa nisy ankehitriny Nosedraina ny ADN coyote kokoa noho ny amboadia tena tsy manana palitao lava toy izany. Tsy hanaiky ny toetr'andro mihitsy. Alika mahafatifaty na izany aza, anarana tsara, saingy tsy marim-pototra amin'ny fisoloana azy. Niorina tamin'ny nofinofy tandrefana momba ny Teratany Amerikanina izy ireo. '
NAID - Registra alika amerikanina teratany
'Ireto ny alika indianina amerikanina zanako, izay alika tsy fahita firy izay mitovy amin'ny alika niara-dia tamin'ny foko indizeny.' —Ny tetik'asa fiompiana maso maso amin'ny alina Ny tetik'asa fiarovana ny alika indianina amerikana
alika toa coyote
Takoda aka 'Kaody' ny alika indianina amerikanina teraka tamin'ny faha-7 taonany
'Ity i Zakai Ashkii Elu ilay Alika Indiana Amerikanina Teratany amin'ny 4 taona. Ny reniny dia Hakata ary Paahuma rainy. Tena be fitiavana sy be fitiavana izy ary tia miakatra am-pandriana miaraka amiko ary mifampikasoka. Famantaranandro fanairana lehibe izy ary hamoha ahy rehefa fantany fa tonga ny fotoana tokony hitsanganako amin'ny fikapohana ahy na ny fandriana amin'ny tongony. Izy no mpiambina ny zanako lahy ary sosotra rehefa tsy mahita izy. Nahita azy aho nibanjina ny lalana nandehanan'ny zanako nandritra ny fotoana ela taorian'ny nandehanany ary avy eo dia hijery sy hihaino izany lalana izany foana aho amin'ny fotoana rehetra nandehanany. Vahiny tsy fantatra izy, fa rehefa fantany ny olona dia avelany hanome azy ireo fitiavana sy fiheverana be dia be izy. Ankafiziny ny fikosehana ny kibony ary avelany hataonao izany raha mbola afaka miala amin'izany izy. Tiany ny ety ivelany, fa te hiaraka amin'ny ankohonany koa. ' Sary natolotry ny Indian Valley Kennels
Zakai Ashkii Elu ilay alika indianina amerikanina teraka tamin'ny faha-4 taonany, sary natolotry ny Indian Valley Kennels
'Ate' Lowan, Alika Indianina Amerikanina 10 herinandro. Ate 'tia ny lanezy ... na dia iray santimetatra monja aza!' Sary natolotry ny Sacred Song Indian Dogs
Alika Indiana Amerikanina tera-tany amin'ny 3 ½ herinandro
Cocker spaniel sy Shih Tzu
'Tsy afaka milaza marina amin'ny sary ianao, fa mipetraka ao anaty rano i Blytala. izy tia rano . Natsipiny tao anaty fitoeran-drano ny lovia rano ary nanomboka nilalao tao izy. Ny mampihomehy dia, halany ny mandro fa tia milalao amin'ny ranonorana na ny rano anaty vilia rano !!! Blytala dia 10 herinandro amin'ity sary ity. '
'I Catori ity. Alika Indianina Amerikanina 7 volana izy. Tena milalao izy ary tia mandeha an-tongotra. Mandeha azy manodidina ny iray kilaometatra isan'andro aho . Na dia tsy fantatra hiaro aza ny taranany dia mpiaro tsara izy. Malina izy amin'ny manodidina ny olon-tsy fantatra sy ny alika hafa. Tiany ny mandainga amin'ny fianakaviany ary manakaiky antsika. Tena manan-tsaina izy. Ireo alika ireo dia mifamatotra mafy amin'ny tompony. Catori no fanapahan-kevitra tsara indrindra noraisiko. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Alika Indiana Amerikanina Teratany
Sarin'ny alika indianina amerikanina tera-tany 1
Sarin'ny alika indianina amerikanina 2
black & Tan coonhound alika kely
alika izay manaikitra ny kely indrindra
sarin'alika alika heeler manga
Alika kely mpanao ady totohondry 9 herinandro